Aware na Ɛma Nnipa Ani Gye Anaa? | N&M
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ɛyɛ ampa sɛ Bible kyerɛkyerɛ sɛ obi ani begye a, gye sɛ ɔware anaa? Anhwɛ a, w’adwene bɛyɛ wo sɛ Onyankopɔn Asɛm kyerɛ saa. Adɛn ntia?
Sɛnea Genesis nhoma no kyerɛ no, Onyankopɔn hui sɛ “enye” sɛ ɔbarima a odi kan Adam nko ara bɛtena. Enti Onyankopɔn yɛɛ Hawa sɛ “ɔhokafo a ɔfata” maa Adam. (Genesis 2:18) Asɛm a wɔkyerɛɛ ase “ɔhokafo a ɔfata” no kyerɛ biribi a ɛma ade bi di mũ. Yɛhwɛ saa asɛm yi a, anhwɛ a yɛbɛka sɛ obi nwaree a, ɛkyerɛ sɛ onni mũ. Bio nso, Bible ka nsɛm pii a ɛkyerɛ sɛ aware de nhyira ne anigye ba. Rut ho asɛm no yɛ nhwɛso biako.
Nanso, yebetumi aka sɛ saa asɛm no nti, sɛ Kristoni anware anwo mma a, ɛkyerɛ sɛ onni mũ na ɔrennya anigye anaa? Ɛnyɛ saa na asɛm no te. Onipa a odi mũ na onyaa anigye sen obiara wɔ asase so ne Yesu Kristo. Nanso wanware da na owui. Ná Yesu nim nyansa sen onipa biara a watena asase so pɛn, na “anigye Nyankopɔn” Yehowa suban no ara bi na na ɔno nso wɔ. (1 Timoteo 1:11; Yohane 14:9) Yesu kyerɛɛ nea ɛbɛma obi anya anigye anaa wanya nhyira wɔ wiase. (Mateo 5:1-12) Wanka sɛ aware ka ho.
Eyi kyerɛ sɛ Bible dannan n’ano wɔ aware ho anaa? Dabida. Ɛsɛ sɛ yɛhwɛ nea enti a Yehowa hyehyɛɛ aware. Ɛwom, ɔhyehyɛɛ aware sɛ ɛmma nnipa anigye, na wonnya ayɔnkofa a ɛkɔ akyiri ne awerɛkyekye, nanso mmere bi a atwam no, aware maa Onyankopɔn apɛde bi yɛɛ hɔ. Ɛho nhwɛso ne sɛ, na Onyankopɔn pɛ sɛ Adam ne Hawa ‘wo na wɔdɔɔso na wɔhyɛ asase so ma.’ (Genesis 1:28) Sɛ Adam ne Hawa anware a, anka wɔn mu biara rentumi mma Onyankopɔn atirimpɔw no mma mu. Mmom, na wɔn mu biara wɔ dwuma titiriw bi di na ama saa atirimpɔw no aba mu.
Bio nso, bere a Yehowa ne Israel man nantewee no, na ɔwɔ atirimpɔw pɔtee bi a ɛfa aware ne abusua ho. Ná ɔpɛ sɛ ɔman no mu nnipa dɔɔso sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn atamfo mmu mfa wɔn so. Ná ɛyɛ n’atirimpɔw nso sɛ Mesia no befi Yuda abusua mu aba na wabegye adesamma anokwafo afi bɔne ne owu mu. (Genesis 49:10) Enti sɛ Israelni bea a osuro Onyankopɔn ware wo mma a, na wobu no sɛ ɛyɛ nhyira kɛse, na sɛ amma saa a, ɛnde na ayɛ awerɛhow ne aniwu.
Ɛnnɛ nso ɛ? Onyankopɔn ahyɛde a ɔde maa nnipa sɛ wɔnwo ‘nhyɛ asase so ma’ tete mmere mu no, ɛnnɛ a nnipa ayɛ bebree wɔ asase so yi, ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristofo ware na wɔwo anaa? Dabi. (Mateo 19:10-12) Ɛho nhia bio nso sɛ wɔbɔ abusua a Mesia befi mu aba anaa ɔman a wɔbɛwo Agyenkwa no ato mu ho ban. Sɛ ɛte saa a, ɛnde adwene bɛn na ɛsɛ sɛ Kristofo nya wɔ aware ne sigyadi ho?
Nea ɛwom ara ne sɛ yebetumi aka sɛ aware ne sigyadi nyinaa yɛ akyɛde a efi Onyankopɔn hɔ. Yɛn nyinaa nim sɛ akyɛde bi wɔ hɔ a eye ma obi nanso enye mma obi. Aware yɛ ade kronkron a ɛma yenya ɔdɔ ne ayɔnkofa ne nnyinaso pa ma abusua. Nanso Bible ka no pefee sɛ wɔn a wɔbɛware wɔ wiase bɔne yi mu no behyia ɔhaw anaasɛ wɔn ho “behiahia wɔn ɔhonam mu.” Ɛba sigyadi so a, Yehowa mmu no sɛ ɛde aniwu ne awerɛhow ba. Mmom no, n’Asɛm kyerɛ sɛ sigyadi ye sen aware wɔ nneɛma bi mu.—1 Korintofo 7:28, 32-35.
Enti Bible nkasa ntia aware, na ɛnkasa ntia sigyadi nso. Yehowa a ɔhyehyɛɛ aware ne abusua no, ɔpɛ sɛ wɔn a wɔsom no nyinaa, asigyafo ne awarefo nyinaa, ani gye na wonya abotɔyam.